Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCyprus naseGolden Visa
Sinikeza Izinsizakalo Zokufuduka Komnotho eCyprus nge:
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCyprus
● Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eCyprus
● I-visa yegolide eCyprus
● Iphasipoti yesibili evela eCyprus
● Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCyprus ngokutshala imali kwi-real estate
Khipha ku-internet Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eCyprus kanye nabameli be Ukuhlala kabusha ngo-Investment eCyprus kanye nabathengisi bezinhlelo zokuhlala kabusha eCyprus basebenza ngokubambisana ekuvikeleni kwamakhasimende.
Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali eCyprus kunikela ngezinsizakalo zokuhlala ngokutshalwa kwezimali eCyprus, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eCyprus, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eCyprus, Ukuhlala kabusha okwesibili ngokutshalwa kwezimali eCyprus, Ukuhlala kabusha okumbili ngokutshalwa kwezimali eCyprus, ukuba yisakhamuzi nokuhlala ngokutshalwa kwezimali eCyprus , Ukuhlala unomphela ngokutshalwa kwezimali eCyprus, Ukuhlala okwesikhashana ngokutshalwa kwezimali eCyprus, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eCyprus, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eCyprus, Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eCyprus, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eCyprus, okwesibili Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus, ubuzwe obubili ngokutshalwa kwezimali eCyprus, indawo yokuhlala nobuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus, ukuhlala kanye nokuba yisakhamuzi ngokutshala imali eCyprus, izinhlelo zezomnotho eCyprus, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eCyprus, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eCyprus, okwesibili ipasipoti eCyprus, izinhlelo zepasipoti zesibili eCyprus , uhlelo lwesibili lwephasiphothi eCyprus, ipasipoti yesibili eseCyprus, indawo yokuhlala kanye nepasipoti yesibili eCyprus, ipasipoti yesibili yezokuxhumana eCyprus, ipasipoti yesibili ngokutshala imali eCyprus, ipasipoti yesibili yobuzwe eCyprus, uhlelo lwesibili lwamaphasipothi eCyprus, amasikimu epasipoti wesibili eCyprus , i-visa yegolide eCyprus, ama-visa egolide eCyprus, izinhlelo ze-visa zegolide eCyprus, uhlelo lwe-visa yegolide eCyprus, i-visa yesibili yegolide eCyprus, uhlelo lwesibili lwe-visa yegolide eCyprus, i-visa yegolide emibili eCyprus, ubuzwe kanye ne-visa yegolide eCyprus, ukuhlala kanye ne-visa yegolide eCyprus, ubuzwe be-visa yegolide eCyprus, uhlelo lwe-visa egolide eCyprus, izikimu ze-visa zegolide eCyprus.
"1 izixazululo zokumisa" kwakho konke ukuhlala kwakho ngokutshala imali eCyprus ngokuxhaswa okwengeziwe.
Ukutshalwa Kwezimali Okuncane eCyprus ukuze kuhlalwe kabusha ngokutshalwa kwemali: EUR 300,000 (i-visa yegolide)
Isingeniso iCyprus kanye nokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali
Funda kabanzi ngeCyprus
ICyprus iya ngokuya yanda ngokwengeziwe phakathi kwabahambi abaphambili nenethiwekhi yokubuka amabhizinisi online. Isiqhingi esisogwini lolwandle olusempumalanga yeMedithera, iCyprus ayisiyo kuphela indawo yokuheha, kepha futhi iyindawo ekahle yokubeka isisekelo sombonisi webhizinisi.
Izwe lase-European Union, ukuhlolwa okuphansi, isakhiwo senhlangano eyisisekelo, amanethiwekhi asathuthuka kanye nemoto enkulu exhuma kwinsalela yeYurophu naseMpumalanga Ephakathi, iCyprus imaka kakhulu amanani amakhulu amabhokisi okuhlola osomabhizinisi abaningi. Kunogu lolwandle oluningi oluhle kulesi siqhingi, futhi ngokungangabazeki lungenye yezingcezu zami zokuqala zempilo yaseCyprus. Kusukela ngo-2019, iCyprus inikela ngezilwandle ezingama-49 eziluhlaza okwesibhakabhaka futhi eziningi zazo zilungele izindawo zamanzi, ngokwesibonelo, ukushushuluza ngokushushuluza, i-wakeboarding nokushushuluza kwamanzi.
Ngokwengeziwe, entshonalanga yesiqhingi esifundeni sasePaphos, kuvame ukuvuvukala okwasentshonalanga okulusizo ekusefeni. Kukhona nokuvuleka okwanele kokugxuma neCyprus okunikeza izindawo eziningi ezibalulekile zokuziphonsa, ngokwesibonelo, i-Amphorae Caves kanye ne-MS Zenobia wreckage. Njengoba iCyprus ibalulekile kwi-European Union, isizwe singeniswa mahhala emakethe eyodwa nakwinhlangano yamasiko. Lokhu kusho ukuthi lesi siqhingi sinikeza amalungelo afanayo njengensimu ethile yesizwe saseYurophu.
Ngokwengeziwe, ngemali yaseCypriot eyi-Euro, kuneminyango evulekile yokuhweba nokufakwa okuvelele kwezimpahla zemali. Indlela yokuphila yaseCypriot iyiMedithera ngokweqile, futhi nesimo sezulu sinjalo! Unyaka wonke, isimo sezulu esishisayo singesinye isici esihehayo kulesi siqhingi.
ICyprus inesinye sehlobo elishisa kakhulu nezomoya wasebusika eMedithera. Zonke izinto ezicatshangwayo, izinga lokushisa laminyaka yonke liphakathi kuka-25 ° C emini no-15 ° C ebusuku.
Kuzo zonke izinyanga zentwasahlobo, ikakhulukazi ngoJulayi nango-Agasti, lesi siqhingi siyashisa! Ngokushisa okujwayelekile kwasemanzini okungu-30 ° C emini kanye no-23 ° C kusihlwa. Ingabe kuyabiza ukuhlala eCyprus?
Hhayi ngaphansi kwanoma yisiphi isimo.
Ngokuvamile, izindleko ezijwayelekile zezinto eziyisisekelo eCyprus ziphansi ngokweqiniso uma ziqhathaniswa nezinye izizwe zaseYurophu. Ngenxa yokuba isiqhingi kanye nemfuneko yokungenisa, kunezinto ezimbalwa ezibiza kakhulu, ngokwesibonelo, izimoto. Ngakho-ke, lokhu kufanele kubalwe ekusebenziseni kwakho imali lapho ucabanga ukuthuthela eCyprus.
Izindleko ezijwayelekile zedili lababili esiqhingini zizokwehlisa ijubane ngo- € 25-30. Uma kungenzeka ukuthi ungumuntu othanda ukudla kwaseGrisi naseMpumalanga Ephakathi, uzothola ama-tavernas amaningi ajwayelekile anikeza ukondleka kwekhwalithi enhle ngezindleko ezinengqondo.
Ukusuka e-Expatistan, eNicosia naseLimassol yizindawo ezimbili ezisemadolobheni ezibiza kakhulu kulesi siqhingi. Ngaphandle kwalokhu, imiphumela ikhombisa ukuthi izindleko ezijwayelekile zezinto eziyisisekelo eNicosia cishe zingama-28% ezingabizi kakhulu kunaseStockholm.
Ngokwami, abantu baseCyprus banolwazi futhi bahlala bekhuluma isiNgisi esijwayelekile. Lapho ngihlala eCyprus, ngingahlongoza ukuhlangana nabantu abaseduze ukuze sihlangabezane nendlela yokuphila yaseCypriot ngokugcwele! Izindawo zokukhokha intela zaziwa ngokuvumela abantu bamazwe ithuba lokukhokha kancane uma kuqhathaniswa nalokho abebengakwenza emazweni abo asendaweni.
Ngaphezu kwalokho, iCyprus ingahle izuze ngokungafani ngokuqhathaniswa nezizwe ezahlukahlukene maqondana nengcindezi yokuhlola ejwayelekile.
Ukuphendukela enkabeni yebhizinisi ne-akhawunti bekusoloko kuyisidingo seCyprus, ikakhulukazi kusukela ukwahlukaniswa kwesizwe ngo-1974. Isizwe empeleni sincike kakhulu embonini yaso yezokuvakasha; kodwa-ke, isizwe sinikeza umfutho wezindleko ezikhangayo kubabonisi bebhizinisi abavela emhlabeni wonke.
Kube nezinguquko eziningi esakhiweni somsebenzi waseCypriot esikhathini eside. Kunoma ikuphi, kusekhona izinzuzo eziningi zokukhokhiswa obhalisiwe esizweni.
Imininingwane eyisisekelo yokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kweCyprus
Utshalomali oluncane lwe Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCyprus
EUR 300,000 (i-visa yegolide)
Imali eyengeziwe ye- i-visa yegolide ye Cyprus
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCyprus
Isitifiketi sokwenza ubuwena ('Ubuzwe') noma imvume yokuhlala unomphela, ngokuya ngohlelo,
Icubungula isikhathi sokuhlala ngokutshalwa kwezimali eCyprus
3 - 4 izinyanga
Kufanele ube nemvume yokufuduka izinyanga eziyisithupha futhi kufanele ube nenani lokuthenga le- € 6 yokuhlala yokuhlala
Iminyaka engu-7 yokuhlala ngokusemthethweni eCyprus
Ubuzwe obubili buvunyelwe izakhamizi zaseCyprus
Izinketho Zokutshalwa Kwezimali ze Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus
Izakhiwo / Ibhizinisi
Kungani kufanele ube yi-Residency ngokutshala imali eCyprus
ICyprus inendawo enhle kakhulu yezwe. Inokuhlala okungabizi kakhulu e-European Union. Amathuba okuvunywa aphezulu kakhulu ezweni. Ngemuva kokuhlala eSipro uzokwazi ukufinyelela kuwo wonke amathuba izwe okufanele likunikeze wona kufaka nezinga eliphakeme lemfundo. ICyprus izoba yingxenye yendawo yeSchengen esikhathini esizayo esiseduze, esizonikeza ithuba lokuhamba nokuhlala kulo lonke elaseYurophu. Ukuba khona ngokomzimba ezweni lomuntu ohlala ngokugcwele akudingeki. Udingeka kuphela ukuthi uvakashele izwe ngesikhathi senqubo yokufaka isicelo.
Ukuthuthela komndeni eCyprus
Izinzuzo zohlelo lokuhlala eCyprus nazo ziyasetshenziswa kumalungu omndeni.
Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eCyprus insite
Isikhathi sokucubungula uhlelo izinyanga ezimbili kuphela. Ngemuva kokuthenga indawo eCyprus, awudingeki ukuthi uhlale ezweni kuphela vakashela iCyprus njalo eminyakeni emi-2.
Ukuthola indawo yokuhlala ngokutshala imali, kufanele utshale imali eCyprus okungenani ama-EUR 300,000. Ngokwengeziwe, kufanele wenze idiphozi yasebhange ye-EUR 30,000. Ngaphezu kwalokho, ucelwa ukuthi wethule imali engenayo yonyaka evela phesheya ubuncane be-EUR 30,000 ngombhangqwana ngamunye. Ngokwengeziwe, i-EUR 5,000 yengane ngayinye kanye ne-EUR 8,000 yomzali ngamunye.
Kuzofanele uze eCyprus kanye ukuze unikeze ngemininingwane ye-biometric edingekayo. Ungavakashela izwe ngesikhathi senqubo yokufaka isicelo noma ngemuva kokuvunywa.
Izidingo zezezimali zeCyprus
Abafakizicelo kudingeka bathenge impahla entsha ngemali ephansi yama-EUR 300,000 eCyprus. Inkontileka yokuthengisa nobufakazi bokuthi udlulise okungenani ama-EUR 200,000 entengo yempahla kufanele kuthunyelwe kanye nesicelo. Kukhona amathuba okuthenga indawo yinkampani. Kodwa-ke, umfakisicelo noma owakwakhe kufanele kube nguye kuphela onamasheya enkampanini.
Ngaphezu kwalokho, umfakisicelo kufanele enze idiphozi yasebhange ye-EUR 30,000 Cyprus. Idiphozi kufanele ishiywe ebhange iminyaka engu-3. Ngemuva kweminyaka emithathu. lonke inani lizobuyiselwa kumuntu.
Imali kahulumeni yokufakwa kwezimvume zokuhlala ingu- € 500 ngabashadikazi. Kukhona imali eyengeziwe yama-EUR 70 ngokuncika ngakunye okungeziwe. Kukhona imali ekhokhelwa i-EUR 50 umuntu ngamunye ngemininingwane ye-biometric.
Ukusekelwa kwamakhasimende ngokuhlala kabusha ngokutshala imali eCyprus
Ithimba lethu le- Indawo yokuhlala ngama-Investment Agents eCyprus futhi Indawo yokuhlala Ngokutshalwa Kwezezimali Abameli ngeKhupro inikeza amaklayenti nemindeni yawo eCyprus ukwesekwa kobuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eCyprus, ukuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela eCyprus namanye amathuba okutshalwa kwezimali kwamanye amazwe, emazweni angama-37.
Izinsizakalo zethu azigcini nje ngokuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela eCyprus noma i-Golden Visa yaseCyprus noma ubuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eCyprus noma ipasipoti yesibili, futhi sisiza emathubeni amahle kakhulu okutshalwa kwezindlu kuKhupro, nokunikeza isisombululo esigcwele uma ufuna ukusungula inkampani ICyprus noma ulwandle, izinsiza zabantu eCyprus nokunye okuningi, okubandakanya ukuhlelwa kwezezimali nokunye okuningi.
Ukusiza amaklayenti ethu ngezixazululo ezisuselwe ekubeni yisakhamuzi e-Cyprus nasendaweni yokuhlala yesibili.
Ukusekelwa Okukhethekile Kwezakhamizi ZaseCyprus:
Sinikeza okungabizi Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali kweCyprus, ngokusebenzisa okungabizi kwethu ifemu yomthetho wokutshalwa kwezimali kanye nowokufika AbaseCyprus, abasebenzeli bezokutshalwa kwezimali abafinyelelekayo baseCyprus, Indawo yokuhlala engabizi ngabacwaningi bokutshalwa kwezimali eCyprus, Indawo yokuhlala engabizi ngabameli bezokutshalwa kwezimali baseCyprus kanye nenkampani yokubonisana nabokufika engabizi kakhulu eCyprus
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali kusuka eCyprus kuya emazweni angama-37.
I-visa yegolide eCyprus emazweni angama-37.
Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali kusuka eCyprus kuya emazweni angama-37.
Iphasipoti yesibili esuka eCyprus iya emazweni angama-37.
Ukuthuthela Kwamabhizinisi Kususelwa eCyprus kuya emazweni we-106.
Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali ezivela eCyprus.
Izinhlelo ze-visa zegolide eCyprus emazweni angama-37.
Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali ezisuka eCyprus ziya emazweni angama-37.
Izinhlelo zepasipoti zesibili ezivela eCyprus ziya emazweni angama-37.
Izinhlelo zebhizinisi lokuthuthela kwelinye izwe ezisuka eCyprus ziya emazweni angama-106.
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus ngeReal Estate
Sinikeza ukwesekwa kotshalomali bezindlu eCyprus ngombono wokuthi iklayenti kufanele lithole inzuzo enhle ekutshalweni kwezimali eCyprus, noma kunini, lapho bafuna ukuphuma ekutshalweni okwenziwe yi-Residency yabo ngokutshala imali eCyprus. Sinokuhlangana nabathuthukisi bezindawo ezimbalwa eCyprus abanerekhodi elihle futhi impahla yabo isezindaweni ezinhle eCyprus, ilanda izimbuyiselo ezinhle kakhulu.
Izinhlelo ezihamba phambili zokuhlala kwempahla zaseCyprus ngokutshalwa kwezimali ku-real estate eCyprus.
Udinga ukwazi - Indawo yokuhlala yaseCyprus Ngotshalomali
Ukuhlala kabusha nguMmeli Wotshalomali eCyprus kuzohlinzeka ngosizo lwemibhalo eningiliziwe ngokuhlala kwakho ngempumelelo ngokutshala imali eCyprus. Izinsizakalo zethu ezijwayelekile zokuhlala ngokutshalwa kwezimali eCyprus zifaka:
Abameli bethu bazoqonda izidingo zakho zokufuduka eCyprus noma uye eCyprus, ngokuya ngokuthi iziphi iziphakamiso ezizokwenziwa
Senza inkuthalo yokuqala efanelekile, ukulungiselela umbiko ngaphambi kokuncoma ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCyprus kumakhasimende ukuze athole imvume yokuhlala eSipro nokunciphisa ubungozi bokwenqaba.
Ngokuya ngombiko wokukhuthala waseCyprus, sincoma nezinye izinhlelo zempumelelo engcono.
Ukuze siqhubekele phambili nokuhlala kwakho ngokufaka isicelo sokutshala imali eCyprus sizodinga amakhophi askeniwe epasipoti yamakhasimende namalungu omndeni.
Ukuhumusha kanye ne-apostille yamadokhumenti Ukuhlala kabusha ngokufaka isicelo sokutshala imali eCyprus. Abameli bethu abakhethekile be-Residency ngokutshala imali eCyprus kanye ne-visa yegolide bazosiza ngokugcwalisa amafomu nemibhalo.
Lapho imibhalo yakho neyomndeni wakho yokuhlala ngokufaka isicelo sokutshala imali eCyprus isilungile, sizoyigcwalisa ngeziphathimandla ezifanele zaseCyprus.
Isikhathi: 3 - 4 izinyanga
Lapho nje isicelo sakho sokuhlala ngokutshalwa kwezimali eCyprus sivunyiwe, sihlanganyela izindaba ezinhle nawe bese siqala ukulungiselela ezinye izisekelo.
Asisekeli noma sihlinzeke ngokuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali eCyprus kubantu ababalulwe ngezansi noma amabhizinisi eCyprus:
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eCyprus azinikelwa kubahwebi noma abasabalalisi bezingalo nezinhlamvu ukusuka noma ukuya eCyprus.
Indawo yokuhlala ngezinhlelo zokutshala imali eCyprus ahlinzekelwa ukubhekwa kwezobuchwepheshe eCyprus noma ubuhloli bezimboni bezinhlelo zokutshala imali ngaphakathi noma ukusuka noma ukuya eCyprus.
Indawo yokuhlala ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali kweCyprus ahlinzekelwa noma yimiphi imisebenzi engekho emthethweni noma yobugebengu eCyprus.
Indawo yokuhlala ngokusekelwa kotshalomali ngeKhupro akukhona okwabantu abasebenza ngezinto ze-Genetic eCyprus.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali eCyprus akukhona okwamabhizinisi asebenzisana ngezikhali eziyingozi noma eziyingozi zebhayoloji noma izikhali zenuzi eCyprus.
Indawo yokuhlala ngohlelo lokutshala imali ukusekelwa kweCyprus akutholakali kubantu baseCyprus abasebenza ngokuhweba, ukugcina eCyprus, noma ukuthuthwa kwezitho zomuntu.
Indawo yokuhlala ngokutshala imali ngeKhupro akuyona eyezinkampani zokutholwa ezingekho emthethweni.
Indawo yokuhlala insiza yezinhlelo ngeKhupro akuzona ezenkolo namahlelo abo okusiza abantulayo eCyprus.
Indawo yokuhlala ngezinsizakalo zokutshala imali ku Cyprus ayihlinzekwa kubantu abasebenza Izithombe Zobulili Ezingcolile eCyprus.
Ukuhlala kwethu abameli eCyprus awasekeli ukuhweba ngebhizinisi ngezinto zezidakamizwa eCyprus.
“Isaziso Esibalulekile : IMM Solutions INC ithatha ukunakekela okufanelekile ukuze iqinisekise imibhalo ye-AML yamakhasimende aseCyprus kanye neKYC yawo kepha asemukeli noma imiphi imithwalo yemfanelo yanoma ikuphi ukwenqatshwa yiziphathimandla eCyprus ukuvunywa kwesicelo se Indawo yokuhlala ngokutshalwa kwezimali eCyprus.
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCyprus nakwamanye amazwe, kanye nokunye okuningi okusekelwayo.
Sinikezela ngokuhlala okuhle kakhulu ngokusekelwa kokutshalwa kwezimali eCyprus ngokutshalwa kwezimali, ukuthuthela kwamanye amazwe kanye nokuhlelwa kwezindlu eCyprus.
Isekelwa yi-Residency yamazwe omhlaba ngesipiliyoni sokutshala imali kanye nezimfuneko zomthetho zaseCyprus, senza izixazululo ezinhle kakhulu.
I-Residency yethu ngezinsizakalo zokutshala imali eCyprus inikela ngamanani ashibhile, ngenani lempumelelo elingafinyeleleka kahle eCyprus.
Sithathe isipiliyoni seminyaka yokuHlala okuMbili eCyprus okusekela amaklayenti nemindeni yawo eCyprus.
Ukuhlala Okuhlangenwe nakho ngabaceli bokutshalwa kwezimali eCyprus kanye nabameli bezomthetho baseCyprus abanikeza ukusekelwa kumakhasimende.
Sinabaceli abahle kakhulu kanye nabasebenzeli benqubo yokuphathwa kweCyprus nokusetshenziswa abazinikele empumelelweni yakho.
Ngaphambi kokuhlala kwakho eCyprus nangemva kokuvunywa, ilungu lethu leqembu eliphakeme lizoba lapho ngebhizinisi noma ukusekelwa komuntu siqu eCyprus
Sinesipiliyoni samazwe omhlaba ku-Residency ngokutshala imali kufaka phakathi iCyprus, sisiza amaklayenti avela kuwo wonke umhlaba ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Uma kwenzeka, ukuhlala kwakho ngokutshala imali eCyprus kwehluleka, kunamanye amazwe angama-36 esiwahlinzekayo, sikulungele ngohlelo B.
Bala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali eCyprus
Ukubala izindleko zokuhlala kabusha ngokutshala imali eCyprus sicela ugcwalise yonke imininingwane kufaka phakathi amalungu omndeni kanye neminyaka yabo. Ngenxa yenani elikhulu lamakhasimende eCyprus, siyakwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono ngezindleko eziphansi. Izibalo zizofaka phakathi izindleko zokuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eCyprus nezinye izindleko.
izinhlobo I-visa ngeKhupro
Inqubo yemvume yokusebenza eCyprus
Indawo yokuhlala okwesikhashana eCyprus
Indawo yokuhlala unomphela eCyprus
Ukuba yisakhamuzi saseCyprus
Ama-Embasi nama-Consulates aseCyprus
Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus nakwezinye izinsizakalo
Sibhale phansi izinsizakalo ezimbalwa esizihlinzeka eCyprus ngezidingo eziseduze noma ezizayo.
Uma uhlela ukuthuthela nomndeni wakho eCyprus ngokutshala imali, thina njengomlingani wakho weCyprus, sikhona ukuhlinzeka ngeminye imisebenzi eminingi nokuthi ungadinga nini eCyprus ngamanani aphansi.
Ngaphandle kwe-Residency ngokubonisana ngokutshala imali eCyprus, sihlinzeka ngamabhizinisi, i-IT kanye nezinsizakalo ze-HR naseCyprus, ongazitholi ngaphansi kwesambulela esisodwa esinikezwe abanye abaxhumanisi baseCyprus okusenza sithenge indawo eyodwa eCyprus nakwamanye amazwe we-106.
"Sitshale iminyaka eminingi ye-experimentania nasemhlabeni jikelele emazweni angama-106 ukusiza imindeni, abantu ngabanye kanye nosomabhizinisi baseCyprus ekufezeni izinhloso nezifiso zabo."
Sisekela indlela yamakhasimende ethu edlula i-Residency ngokutshala imali eCyprus ngosizo lwabameli bethu, ababonisi kanye nokubopha eCyprus nakwamanye amazwe.
Inkampani e Cyprus
Singakusiza bhalisa inkampani eCyprus noma Amazwe ase-Offshore namazwe ayi-106 (Izindleko zokubhalisa inkampani eCyprus zishibhile nathi.)
I-Akhawunti Yasebhange eCyprus
Noma yimuphi umtshalizimali othuthela eCyprus uzodinga i-akhawunti yakho yasebhange eCyprus ne-akhawunti yasebhange yenkampani eCyprus, singasiza futhi ngama-akhawunti asebhange aphesheya kwezilwandle.
Isango lokukhokha eCyprus
Ingabe udinga ukubonisana eCyprus, ngoba izixazululo zokukhokha zedijithali eCyprus njengesango lokukhokha lendabuko noma le-fintech eCyprus noma izixazululo ze-crypto, sazise.
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali ukuze ECyprus uma uhlela qala ibhizinisi ngokuthenga ibhizinisi elikhona eCyprus ukuqala ngokushesha eCyprus.
Izinsizakalo ze-HR eCyprus
Our inkampani yezabasebenzi eCyprus ingakusiza ngokuqashwa okusheshayo. Nawe unga izikhala zokuthumela eCyprus free.
Izinombolo zefoni ezibonakalayo zeCyprus
Izinhlelo zebhizinisi zeCyprus kanye ne izinombolo ezibonakalayo zeCyprus Amazwe ayi-102 namadolobha angama-291.
Imisebenzi Yezokuhlela Kwezimali eCyprus
Ukubalwa kwezimali, ukukhuthala okufanele eCyprus nase okuningi.
Ikheli Lehhovisi Elibonakalayo eCyprus
Ukusetha ibhizinisi eCyprus
Ngemuva kokuhlala kabusha ngokutshala imali eCyprus, isethaphu ibhizinisi ku Cyprus.
Sinikezela ngezixazululo ze-IT ezingezansi eziseCyprus
Ukwakhiwa Kwewebhu eCyprus
Ukuthuthukiswa Kwezentengiselwano eCyprus
Ukuthuthukiswa kwewebhu eCyprus
Ukuthuthukiswa kweBlockchain eCyprus
Ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza eCyprus
Ukuthuthukiswa Kwesoftware eCyprus
Abameli Bokuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eCyprus
Sihlinzeka ngokuhlala ngokusemthethweni ngokusetshenziswa kwezixazululo ze-Investment eCyprus futhi impumelelo yamakhasimende ethu ibaluleke kakhulu, eCyprus, singabaholi, inkampani yethu yabameli eCyprus inezinhlaka ezihamba phambili zabokufika naseCyprus, sinedumela lokuletha ulwazi oluhle kakhulu lwamakhasimende eCyprus nge Sula izixazululo zamasu okutshala imali kubantu baseCyprus kanye nemindeni yabo. Ukuhlala kwethu ngethimba lokutshala imali eCyprus kunikeza izixazululo ezenziwe ngobuqili zempumelelo yeKlayenti.
Amalungu akho omndeni (izingane, unkosikazi, abazali) ayayifanelekela imvume yokuhlala eCyprus, lapho imvume yakho yokuhlala eCyprus ivunywa.
Amandla wommeli waseCyprus ayadingeka kuzo zonke izenzo zomthetho ezenzelwe wena yi-Residency ngabameli bezokutshalwa kwezimali eCyprus Uma useCyprus noma uhlela ukuvakashela eCyprus, singathola amandla akho ommeli lapha.
Asikhokhisi imali ethe xaxa ngokuthola iPower of Attorney. Uma uhlela ukuqala ukubhaliswa kwenkampani eCyprus ukude, amandla akho abameli kufanele abe semthethweni ngokufanele ukuthi asetshenziswe endaweni yaseCyprus. Ngokuya ngezwe ohlala kulo, kufanele ngabe ligcotshwe noma livunyelwe ngokomthetho yihhovisi lenxusa laseCyprus.
Imibuzo Ebuzwa Njalo - Ukuhlala Ngokutshalwa Kwezimali eCyprus
Iyini incazelo yokuhlala ngokutshalwa kwezimali eCyprus?
Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCyprus, kungachazwa njengokuthola indawo yokuhlala yaseCyprus ngokutshala imali emnothweni waseCyprus ngezindlela ezahlukahlukene ezinjengebhizinisi, izindlu, izibopho zikahulumeni, njll. Faka isicelo sokuhlala ngokutshala imali eCyprus, ukuhlala ngohlelo lokutshala imali eCyprus kusekelwa ukuhlala nezinsizakalo zokutshala imali eCyprus, ngokuhlala kwethu okuhle ngabameli bezokutshala izimali eCyprus, indawo yokuhlala engcono ngabameli bezokutshalwa kwezimali eCyprus kanye nokuhlala okuhle kakhulu ngabaluleki bezokutshalwa kwezimali eCyprus, abasebenza ngokuhlala kahle kakhulu ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali eCyprus, kanye namafemu amahle abonisana nabokufika eCyprus.
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali eCyprus | Ukuhlala kabusha ngabenzeli bezimali eCyprus | Ukuhlala kabusha ngabameli be-Investment eCyprus | Ukuhlala kabusha ngabameli bezotshalomali eCyprus | Ukuhlala kabusha ngabacwaningi bokutshala imali eCyprus
Iyini incazelo yokuba yisakhamuzi ngokutshala imali eCyprus?
Ukuba yisakhamuzi ngokutshala imali eCyprus, kungachazwa njengokuthola ubuzwe baseCyprus ngokutshala imali emnothweni waseCyprus ngezindlela ezahlukahlukene ezifana, ibhizinisi, ingcebo, izibopho zikahulumeni, njll eCyprus. Faka isicelo sobuzwe ngokutshala imali eCyprus, ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eCyprus olwesekelwa ubuzwe ngezinsizakalo zokutshala imali eCyprus, ngobuzwe bethu obuhle ngabameli bezotshalomali eCyprus, ubuzwe obuhle ngabameli bezotshalomali eCyprus kanye nobuzwe obuhle ngabeluleki bezotshalomali baseCyprus, abasebenza ubuzwe obuhle ngabenzeli bezimali eCyprus, kanye namafemu amahle kakhulu okubonisana nabokufika eCyprus.
Izinsizakalo Zokungena kwabatshalizimali ezingabizi eCyprus | Ababizi bokufika abafinyelelekayo eCyprus | Abameli bezokufika abatshali bezimali abafinyelelekayo eCyprus | Abameli abangabizi bezimali zabokufika eCyprus | Izeluleko zabatshalizimali abangenahle eCyprus | Amafemu omthetho wokufuduka afinyelelekayo eCyprus
Iyini incazelo yepasipoti yesibili eCyprus?
Iphasiphothi yesibili eCyprus, ingachazwa njengokuthola ubuzwe obusemthethweni baseCyprus ngokutshala imali kwezomnotho waseCyprus ngezindlela ezahlukahlukene ezinjenge, izindlu, izindlu, amabhizinisi kahulumeni, njll. Faka isicelo sephasiphothi yesibili eya eCyprus, uhlelo lwesibili lwephasiphothi laseCyprus olwesekelwa izinsizakalo zepasipoti zesibili zaseCyprus, ngokusebenzisa abameli bethu besibili abaphuma phambili eCyprus, abameli bamapasipoti wesibili abahamba phambili eCyprus kanye nabeluleki abahamba phambili besibili bephasipothi baseCyprus, abasebenza kuma-passport wesibili abahamba phambili eCyprus, kanye namafemu abonisana kahle nabokufika eCyprus.
Izinsizakalo zepasipoti zesibili zaseCyprus | Abenzeli bepasipoti besibili eCyprus | Abameli bepasipoti besibili eCyprus | Abameli bepasipoti besibili eCyprus | Abaluleki besibili bepasipoti baseCyprus
Iyini incazelo ye-visa yegolide eCyprus?
I-visa yegolide eCyprus, ingachazwa njengokuthola imvume yokuhlala eCyprus ngokutshalwa kwezimali emnothweni waseCyprus ngezindlela ezahlukahlukene ezifana, amabhondi kahulumeni, ibhizinisi, izindlu nomhlaba, njll. Faka isicelo se-visa yegolide eCyprus, uhlelo lwe-visa legolide lweCyprus olwesekelwa Izinsizakalo ze-visa zegolide zaseCyprus, ngokusebenzisa abameli bethu abahamba phambili be-visa baseCyprus, abameli abangcono kakhulu be-visa baseCyprus kanye nabeluleki abahamba phambili be-visa baseCyprus, abasebenza kuma-visa wegolide ahamba phambili eCyprus, kanye namafemu abonisana kahle nabokufika eCyprus.
Izinsizakalo ze-visa zegolide zaseCyprus | Abameli be-visa begolide eCyprus | Abameli begolide begolide eCyprus | Abameli begolide begolide eCyprus | Ababonisi be-visa begolide baseCyprus
Yiluphi utshalomali oluncane lokuhlala ngokutshalwa kwezimali eCyprus?
Ukutshalwa kwemali okuncane kokuhlala ngokutshala imali eCyprus yi-EUR 300,000 (i-visa yegolide).
Ngabe unikeza ukusekelwa okungokomthetho kweCyprus yeResidency ngokutshala imali?
Yebo, ummeli wethu eCyprus kanye nabasebenzeli eCyprus banikela ukwesekwa kweZakhamuzi ngokutshalwa kwezimali eCyprus.
Ngabe ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCyprus kuyabiza?
Izindleko zokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus kanye nokuhlala kabusha ngezidingo zesikhwama sokutshala imali eCyprus kungokwabantu abanenani eliphakeme, sibiza imali yokubonisana kuphela ngokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus, siphinde sinikeze nezinye izesekeli eziningi zeResidency ngezixazululo Zotshalomali.
Iziphi izakhamizi zezwe ezingafaka isicelo sokuhlala kabusha ngokutshala imali eCyprus noma nge-visa yabatshalizimali eCyprus?
Ukuhlala kabusha ngezinsizakalo zokutshala imali kungasetshenziswa izakhamizi zanoma yiliphi izwe kepha izibonelo ezimbalwa ezokuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus kusuka e-Asia, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus kusuka e-Afrika, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus kusuka eYurophu, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus kusuka eNingizimu Melika, Ukuhlala kabusha ngokutshala imali eCyprus kusuka eMalaysia, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus kusuka eBangladesh, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus kusuka e-Indonesia, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus kusuka eSri Lanka, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus kusuka eNepal, ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus kusuka eNdiya naseResidency ngokutshalwa kwemali eCyprus kusuka e-UAE.
Ukuhlala Ochwepheshe Ngesiqondiso Sokutshalwa Kwezimali ngeKhupro
Cela ukubonisana kwamahhala kokuhlala kwakho ngokutshala imali eCyprus
Amagama abalulekile ekuhlaleni ngo-Investment for Cyprus
Ukuvuselelwa Kwelayisense Lentela Yomgwaqo
www.investcyprus.org.cy Sikhungo Sokukhuthaza Ukutshalwa Kwezimali ECyprus:
UMnyango Wezobulungiswa Nokuhleleka Komphakathi
Umasipala waseM Lemesos
www.visitcyprus.com Inhlangano Yezokuvakasha yaseCyprus:
Umnyango Wezokuthutha, Ezokuxhumana kanye Nemisebenzi
Umnyango Wezamandla, Wezentengiso kanye Nezimboni
UMasipala wase Lefkara
www.aboutcyprus.org.cy Imininingwane kawonkewonke mayelana neCyprus:
Umnyango Wezemfundo Namasiko (ngesiGerman kuphela)
www.cyprusairports.com.cy Izikhumulo zezindiza zamazwe omhlaba zaseCyprus (iLarnaka nePafos):
Inyunyana Yabantu BaseCyprus
Umnyango Wezolimo, Ukuthuthukiswa Kwezindawo Zasemakhaya kanye Nezemvelo
Izimali ezikhokhwayo Zezikole NezamaYunivesithi
Iminikelo Uhlelo Lokukhokha Nge-inthanethi Lezinsizakalo Zomshuwalense Womphakathi
Inyunyana Yomasipala waseCyprus
UMasipala wePolis Chrysochous
UMnyango Wezabasebenzi, Wezenhlalo Nomshuwalense Wezenhlalo
Xhumanisa UMnyango Wezokufuduka KwaseCyprus , obhekene nokwakha izinqubomgomo zokusheshisa Ukuthuthela Kwelinye Izwe eCyprus